पृथ्वीलालः ८८ वर्षका कालीगढ::Online News Portal from State No. 4
पृथ्वीलालः ८८ वर्षका कालीगढ
बागलुङ, २९ असोज — उमेरले ८८ बर्ष पुगेका पृथ्वीलाल थापाको दैनिकी अहिले पनि बास्तुकलाको काममा बित्ने गरेको छ । बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङस्थित बुकेनीका थापालाई देखाएपछि मात्र घर बनाउने धेरैको चाहना हुन्छ । कतिपयले अहिले पनि उनले हेरिदिए घर राम्रो र बलियो बन्छ भन्ने चाहना राख्छन् । उमेरले गर्दा पहिला जस्तो हिड्न र काम गर्न नसकेपनि उनी घर बनाउन लागेको देखेपछि सल्लाह दिन पनि पुग्छन् । उमेर छँदा बागलुङसहित पर्वत र म्याग्दीका गाउँमा पनि घरको डिजाईन र झ्यालढोकाको डिजाईन गर्न बोलाइन्थ्यो । उनले गरेको कामबाट धेरै प्रभावित पनि थिए । ‘एघार बर्षको उमेरदेखि बुढापाकासंगै काममा हिडेको थिएँ, बिस्तारै सिकाउनेकै सरह काम गर्न सक्ने भएँ’ थापाले भने, ‘केही नाईकेहरुले मलाई मेलामा लैजानै हुँदैन भनेर आरोप पनि लगाएका थिए ।’ १५ बर्षको उमेर पुग्दा उनले गाह्रो र काठको काममा नाइके बन्ने अबसर पाए । उनको कौशलको चर्चा सुनेर तत्कालिन न्यायाधिसले अदालतको भवन बनाउन लगाएको अनुभव छ । ‘तपाईको चर्चा सुनेको छु, तपाईलेनै बनाईदिनुपर्छ भनेर बोलाएपछि मैले बनाईदिएँ’ थापाले भने, ‘उक्त भवन अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ ।’ बागलुङमा पहिलो पटक २०२१ सालमा अदालत स्थापना भएको थियो । २०२७ सालमा बनेको भवनमा लामो समयसम्म जिल्ला र तत्कालिन अञ्चल अदालत बसेर पुनरावेदनहुँदै हाल उच्च अदालत बनेको छ । जिल्ला अदालतको छुट्टै भवन बन्न लागेपछि त्यहाँ उच्च अदालत मात्र संचालनमा छ । उनको चर्चा बागलुङका पुराना नेवारहरुले पनि भोगेका थिए । ‘५० बर्षअघि पनि उनको नाम लिने धेरै थिए’ सामाजिक अगुवा देबबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘राम्रो काम गर्नेलाई उसैबेला पनि सम्मान हुने गथ्र्यो ।’ सदरमुकामका धेरै पुराना घरको जग बसाल्ने श्रेय पनि थापालाई भएको उनले बताए । आधुनिक घर बनाउने चलन आएपछि भने थापा जस्ता पुरानो डिजाईन र सिप भएकाहरुको माग कम भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भने अझै उनीजस्तालाई देखाएर वा सके काममै लगाएर घर बनाउने चलन छ ।
‘गाउँले घर बनाउन पर्दा अझै पनि उहाँको नाम लिने गरेका छन्’ वडा नं. ९ का अध्यक्ष गणेशबहादुर थापाले भने, ‘उहाँ पुरानो कालिगढ, कला र संस्कृतिको संरक्षण कर्ताको रुपमा चिनिनुहुन्छ ।’ उनलाई नगरपालिका सहितका धेरै संस्थाले सम्मान पनि गरिसकेको उनले बताए । मगर समुदायमा जन्मेको भएपनि अहिलेसम्म रक्सी र चुरोट सेवन नगरेकोले उनलाई २३ बर्षदेखि तित्याङमा रहेको मनकामना मन्दिरको पुजारी तोकिएको छ । धार्मिक काममा चासो राख्ने, धेरै शाष्त्रको अध्ययन पनि गरेकोले सबैले सर्बसम्मत उनकै नाम लिएपछि पुजारीको रुपमा काम गरिरहेका छन् । ‘परिवारले दिएको खाने वा ओच्छ्यान पर्ने उमेर भएपनि आँफै पूजापाठ गर्ने, पकाएर खाने काम पनि गरिरहेका छन्’ स्थानीय लालबहादुर थापाले भने, ‘यो उमेरमा काम गर्न सक्नेगरी उनीहरुले खाएको आहार र व्यवहारको सबैले अनुसरण गर्नुपर्छ ।’ आधुनिक खानपानले धेरैको स्वास्थ्यमा असर परेकोले पाकाको व्यवहारबाट सिक्नुपर्ने धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । नगरपालिकाले २८ औं जेष्ठ नागरिक दिवशको अवसरमा थापालाई सम्मान र ५ हजार नगद पुरस्कार पनि दिएको प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । १४ वटा वडाका एक महिला र एक पुरुष गरी २८ जना र १२ जना बिभिन्न बिधामा योगदान पु¥याएका गरी ४० जना जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान र पुरस्कृत गरिएको हो ।